Shiinaha Soosaarayaasha keydka Baaskiilka Casriga ah ee Fudud ee Fudud oo fudud | Shengrui
Qalab casri ah oo fudud oo gidaar lagu rakibay
Bir tayo sare leh, alwaax / bamboo.
Waxyaabaha: bir tayo sare leh, alwaax / bamboo.
Dhamee: Budada waara ee ku dahaadhan midab madow, midab cad.
Qiyaasta alaabada (WxDxH): 24 x 30 x 10 cm ama waa la habeeyay.
Xamuulka ugu badan: 20 kg
Baaxadda dhejiska ugu weyn: M: 48 cm | L: 68 cm
Baaxadda gaarsiinta: Baaskiil buur, walxaha sii kordhaya, shaxanka sii kordhaya
Dhexdhexaadiyaha tuubbada sare: 55 mm | Ku habboon dhammaan qaababka tuubbada sare ee caadiga ah
Xirmo: 1pc / bac caag ah / sanduuq.10pcs / kartoon.
Naqshad fudud, naqshad shelf oo casri ah, fikrad aad u fiican oo aad baaskiil kaaga xajiso darbiga si aad u badbaadiso booska.
Qalabka dhejinta ayaa lagu dari doonaa.
Naqshad qaabaysan, xirmo ayaa la aqbali doonaa.
Darbiga casriga ah ee loogu talagalay baaskiilka wadada ama baaskiil fixie ah.
Maareyn fudud iyo darbiyada derbiga incl. hagaajinta darbiga.
LOOGU TALAGALAY ISKU DARSAN: S-RACK waxaad baaskiilkaga si quruxsan oo raqiis ah ugu soo qaadanaysaa afarta gidaar. Waxaa lagu heli karaa madow ama caddaan. Shelf iskudhafan wuxuu ku siinayaa meel dheeraad ah oo lagu keydiyo qalabkaaga. Kala duwanaanshaha badan ee darbiga baaskiilku wuxuu si fiican ugu habboon yahay qolka fadhiga iyo baaskiilkaaga.
XIDHIIDH & LAGA JOOJIYAY: Kordhinta gidaarku waa deg deg oo sahlan tahay. Waad ku mahadsan tahay alaabada dhejiska la siiyay iyo sheybaarka qodista caqliga leh, qofka heysta waxaa lagu xiri karaa dhowr talaabo oo fudud. Si aan loo dhaawicin rinjiga baaskiilka, jirku wuxuu ku fadhiyaa dareem jilicsan.
ASALKA & SOO SAARKA: Qaybaha shaqsiyadeed waxaa soo saaray farsamo yaqaanno goboleed. At PARAX, kuwani waa sii shaqeynayaan oo waxay ku midoobeen hal shey.
D-STRAP (oo aan lagu darin): Si looga hortago gawaarida hore inay u soo jeesato dhinaca oo ay ka tagto nabarro madow derbiga, waxaad ikhtiyaar u dalban kartaa suunka maqaarka PARAX oo leh Velcro. Tani waxay ku hagaajineysaa qalabkaaga kaliya hal gacan oo ku saabsan hoosta hoose ee qaabka. Waxaad ka heli kartaa D-STRAP dukaankeenna. Waxay ku habboon tahay dhammaan darbiyada derbiyada ee PARAX iyo dhammaan darbiyada kale ee bushkuleeti lagu rakibo.
Hore: Shelf musqusha birta
Xiga: Buug-xisaabeed bir ah oo sabeynaya